Posted by တန်ခူး at 10:51 AM
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တုန်းက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မြန်မာပြည်က အပြန်မှာ ပြောသွားတာလေ။ မြန်မာပြည်က ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ သုံးပုံတပုံခန့်ဟာ နှစ်ရှည် အာဟာရ ချို့တဲ့မှု (Chronic Malnutrition ?) နဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာ။
ကြောင်ကြီးရဲ့ မြီးတံတိုကလည်း အဆီကိုစားလို့ အသားကို အ၀ါးမပျက်သေး။
မစန္ဒာရဲ့ တိမ်ဖုံးပါလို့ လမသာ (ပန်းသီတဲ့ကြိုး) ၀တ္ထုထဲကလို…….
…..သာတဲ့အခါ သာပါလိမ့်မယ်ကွယ်…… လို့….မြန်မာပြည်က ကလေးတွေကို ချော့သိပ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။ မိုးဒေ၀ါကို အားမကိုးရလဲ ကျနော်တို့ လူကြီးတွေပါ အငိုတိတ်ရအောင် လရောင်ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖန်ဆင်းဘို့ ကြိုးစားကြသေးတာပေါ့။
အပူအပင်ကင်းစွာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ သားလေးလိုဘဲ ကလေးတွေအားလုံး မိဘရင်ခွင်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်ပျော်နိုင်ပါစေ...
အဲဒီ သီချင်းအပိုဒ်လေးကတော့ မြန်မာမိခင်တိုင်းလိုလို ရကြတယ်နော်။ ကျနော့် ညီမလေးကိုလဲ မေမေက အဲလိုပဲ ဆိုပြီး ချော့သိပ်တာ ကြားဖူးတယ်။ ကျနော်တို့တုန်းကလဲ အဲလိုပဲ နေမှာပါ။
ကိုပေါရေ...လရောင်အောက်မှာ ကလေးတွေအားလုံး အပူအပင်ကင်းစွာ အိပ်စက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါစို့။